सावधान ! सुत्ने बेलामा झुक्किएर पनि नखानुस् यी खानेकुरा « Khoj Raftar
सावधान ! सुत्ने बेलामा झुक्किएर पनि नखानुस् यी खानेकुरा
धेरै मानिसहरुको बानी हुन्छ केहि चिजहरु चपाईरहने वा खाइरहनुपर्ने । तर, सावधान ! राति अबेर खाना खाने र सुत्ने बेलामा केही खाने बानी छ भने आजैबाट हटाउनुहोस् ।
खानपान व्यवस्थित र समयमा नहुँदा निद्रा नलाग्ने, टाउको दुख्ने, शरीर दुख्ने, हार्मोनको गडबडी, मोटोपन, चिन्ता, निराशा जस्ता समस्या देखिन्छन्। चिकित्सकका अनुसार खाना खाइसकेपछि कम्तीमा २ घण्टा सुत्नु हुँदैन। आज लोकपथले चिकित्सकले दिएका टिप्सहरु यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।
के हुन् ति खानेकुरा : जुन सुत्नुअगाडी खान बर्जित छ ?
पास्ता : पास्तामा अत्याधिक कार्बोहाइड्रेड हुन्छ। धेरै कार्बोहाइड्रेड भएको खाना खाएर सुत्दा मानिसको तौल बढ्ने भएकोले राति पास्ता खानुहुँदैन ।
पिजाः साँझ परेपछी रेस्टुरेन्टतिर घुमेर पिजा खाएर ओछ्यानमा गई अबेरसम्म मोबाईल चलाएर सुत्ने बानीबाट ग्रसित छन् – अहिलेका मानिसहरु । विशेषगरी यूवापुस्तामा यो समस्या बढी छ । तर पिजामा पाइने अधिक क्यालोरीले शरीरलाई फाइदा पुर्‍याउँदैन। एकातर्फ मोटोपन नियन्त्रण हुँदैन। अर्कोतर्फ राम्रारी पाचन प्रक्रिया हुन सक्दैन । त्यसैले कहिलेकाहिँ पिज्जा खान मन लागेमा दिउँसोको समयमा खानु राम्रो हुन्छ ।
अत्याधिक चिल्लो र पिरो : सुत्नुअघि धुलो खुर्सानी मिसाएको खानेकुरा खानु हुँदैन। यसले पेटमा असर पुयाउँछ । खुर्सानी खाँदा एसिडिटी, उच्च रक्तचाप र कब्जियतको समस्या आउन सक्छ। चिल्लो खानेकुराले कफ बढ्ने, अनिन्द्रा मोटोपना लगायत अन्य विभिन्न समस्या निम्त्याउँछ ।
फ्रुट जुस, कफि, अत्याधिक पानी : फ्रुट जुसमा एसिडिटी हुन्छ। कफिमा क्याफिन नामक तत्व । त्यसैले राति फलफूलको जुस खाँदा डायबिटिज र पेट पोल्ने समस्या आउँछ । कफिले निन्द्रा भगाउँछ । यदी राति अत्याधिक पानी पिउनु भएमा घरीघरी पिसाबको लागि ब्यूझिनुपर्छ । यसो हुँदा शरीरले आनन्दको निन्द्रा लिन सक्दैन । त्यसमाथि राति पेटभरी पानी खाँदा उकुसमुकुस भई सुत्न समेत अप्ठेरो हुन्छ । बरु प्यास लागेका बेला घाँटी भिजाउने हिसाबले पानी पिउनुपर्छ ।